Suu Kyi offers to mediate Myanmar peace talks - Worldnews.com
Myanmar,adiverse country of over 55 million people has enteredanew era of unprecedente...
Japan Signs Agreement to Support for Myanmar Peace Center
ဂျပန်အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဌာနကို ထောက်ပံ့ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်...
ဂျပန်အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဌာနကို ထောက်ပံ့ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဌာန (MPC) အတွက် ဂျပန်အစိုးရက ထောက်ပံ့တဲ့ သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ...
Karen Rebels Accuse Myanmar Military Not Sincere on Peace, Conflicts Shadow
အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကြား ပဋိပက္ခတွေ တိုးပွားမှု မြန်မာတပ်က ပင်လုံစိတ်ဓာတ်မရှိလို့...
အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကြား ပဋိပက္ခတွေ တိုးပွားမှု မြန်မာတပ်က ပင်လုံစိတ်ဓာတ်မရှိလို့ဟု စွပ်စွဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရတပ်ကြား ပဋိပက...
Myanmar Peace Walkers Show Supports for President U Thein Sein
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသူများ သမ္မတကို ထောက်ခံကြောင်းပြသ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိတ္ထီလာအ...
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသူများ သမ္မတကို ထောက်ခံကြောင်းပြသ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိတ္ထီလာအရေးအခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မိန့်ခွန်းကို အပြည့်အဝထောက်ခံတဲ့ လူ ၄ဝလောက်ဟာ...
Hundreds of people gather in Yangon calling for an end to the festering conflict between K...
Hundreds of people gather in Yangon calling for an end to the festering conflict between Kachin ethnic minority rebels and Myanmar's army. Duration: 00:37.
Myanmar peace talks with ethnic groups
Myanmar's reformist government has held peace talks withafederation of ethnic groups to ...
Myanmar's reformist government has held peace talks withafederation of ethnic groups to try to resolve issues including the conflict in the northern state ...
Prayer for peace(Myanmar Peace Song).mp4
words by D Pong Maw vocal by Fat Fat....
author: Hpungmaw Dahkum
words by D Pong Maw vocal by Fat Fat.
SSA & Myanmar peace
From:DVB TV News Read More: http://www.tachileik.net/2012/05/ssa.html....
From:DVB TV News Read More: http://www.tachileik.net/2012/05/ssa.html.
Myanmar Youths Sing for Peace at Inya Lake, Call for Ending Conflicts
ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းသံတွေနဲ့ အင်းလျားကန်ဘောင်မှာ ဆုတောင်းကြ ပန်းရဲ့လမ်း ကွန်ရက်အဖွဲ့နဲ့ ...
ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းသံတွေနဲ့ အင်းလျားကန်ဘောင်မှာ ဆုတောင်းကြ ပန်းရဲ့လမ်း ကွန်ရက်အဖွဲ့နဲ့ လူငယ်ကွန်ရက်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သီချင်းဆို၊ ကဗျာ...
Myanmar Youths Sing Songs for Peace at Inya Lake
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ် သီချင်းသံပြိုင်ဆို စစ်ပွဲတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့ အမိေ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ် သီချင်းသံပြိုင်ဆို စစ်ပွဲတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့ အမိမြေအမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်...
Myanmar Guarantees Activists for Cooperation to Achieve Peace
ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် အရပ်ဖက်အဖွဲ့များကို တိုက်တွန်း
author: Myanmar Guarantees Activists for Cooperation to Achieve Peace
အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် အရေးမယူခံရအောင် တာဝန်ယူတယ်လို့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဇန်နဝါရီ ၂၇ရက်နေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေအပြင် အခြားဒေသက စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်သလို ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ လက်ကမ်းကြိုနေတယ်လို့ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ၄၅ဖွဲ့နဲ့ မြန်မာ Peace Center မှာ တွေ့ဆုံပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရွာပုန်းရွာရှောင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဖြစ်တဲ့ IDP တွေကို ကူညီရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနဲ့ နေရပ်မှာ ပြန်လည်ဘ၀ထူထောင်နိုင်ရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး စတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
KIA & Myanmar Military Peace Talk (11.03.2012) morning
China's call Myanmar to peace talks in Kachin State
CNF and Myanmar Kick Off Meeting for Peace in Rangoon
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရန်ကုန်မှာ ဆွေးနွေး ချင်းအမျိုးသားတ...
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရန်ကုန်မှာ ဆွေးနွေး ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ဟာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး...
Re - share from Globalpost....
Re - share from Globalpost.
Peace activists start walk to end Myanmar conflict.mpg
Yangon - UN Secretary-General Ban Ki-moon called fora"serious effort" to end the conflic...
Yangon - UN Secretary-General Ban Ki-moon called fora"serious effort" to end the conflict raging in northern Myanmar, where ethnic minority Kachin rebels a...
myanmar peace song
Myanmar's Karen list peace terms
Rebels from Myanmar's largest ethnic group, who have been fighting for autonomy for the la...
Rebels from Myanmar's largest ethnic group, who have been fighting for autonomy for the last six decades, have outlined their demands for peace with the gove...
Experts from Peace Center Discuss on Peace Building in Myanmar
ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှ ပညာရှင်များ ဆွေးနွေး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွာ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှ ပညာရှင်များ ဆွေးနွေး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေကို ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းေ...
Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi has offered to help negotiate an end to conflicts between the government and the country's ethnic minority groups. Suu Kyi made the offer on Tuesday inavideo address to members of her National League for Democracy party on Union Day, which marks when her late father signeda1947 agreement with leaders of the country's ethnic minorities to gain independence from Britain. The occasion isareminder of an issue that has destabilised the country since even before it obtained independence in 1948 under the name of Burma. Rebellions by ethnic minorities striving for greater...
photo: (AP Photo/Romeo GACAD, POOL) / photo: Public Domain / The White House from Washington, DC
(AP Photo/Romeo GACAD, POOL) / Public Domain / The White House from Washington, DC
CNF and Chin State Govt Peace Agreement, Myanmar.